Ngaba Ndikulungele Ukutshata? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMoore IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
Ukuze ukwazi ukuphendula lo mbuzo umele uzazi wena kuqala. Ngokomzekelo, khawucingisise ngoku kulandelayo:
Ubuhlobo Onabo Nabanye
Ubaphatha njani abazali bakho nabantwana bakowenu? Ngaba ukhe ungakwazi ukuzibamba, mhlawumbi usebenzisa amazwi abukhali ukuze uchaze into oyicingayo? Phofu bona bathini ngawe? Indlela ophatha ngayo abantu bakowenu ibonisa indlela oya kuliphatha ngayo iqabane lakho.—Efese 4:31.
Indlela Obujonga Ngayo Ubomi
Ngaba unesimo sengqondo esakhayo ngobomi okanye ugxeka yonk’ into? Ngaba uyabacingela abanye okanye ufuna kuviwe ngawe—kwenziwe izinto ngendlela yakho? Ngaba uyakwazi ukuzibamba xa uxinezelekile? Ngaba uyakwazi ukulinda? Ukuzama kwangoku ukuba nesiqhamo somoya kaThixo kuya kukunceda ukuba ube yindoda okanye umfazi ofanelekileyo kwixa elizayo.—Galati 5:22, 23.
Uyisebenzisa njani imali? Ngaba usoloko usematyaleni? Ngaba uyakwazi ukuhlala emsebenzini omnye? Ukuba akunjalo, kutheni? Ngaba kungenxa yaloo msebenzi okanye umqeshi wakho? Okanye ngaba kungenxa yobuthathaka onabo omele ubuphucule? Ukuba unengxaki yokusebenzisa imali ngoku, uza kuyiqala ngaphi eyentsapho?—1 Timoti 5:8.
Ubuhlobo Bakho NoThixo
Ukuba uliNgqina likaYehova, bunjani ubuhlobo bakho noThixo? Ngaba wenza konke okusemandleni ukufunda iLizwi likaThixo, ukuya ezintlanganisweni zamaKristu nokufundisa abanye iBhayibhile? Xa utshata ubuhlobo bakho noThixo bumele bomelele.—INtshumayeli 4:9,10.
Okukhona uzazi ukuba ungumntu onjani maninzi amathuba okuba ufumane iqabane eliza kuveza ngakumbi iimpawu zakho ezintle kunobuthathaka bakho.
Ukuvana Nabanye Abantu Uxolo Nolonwabo Ukwenza Amadinga Nokuthandana Umtshato Nentsapho Ulutsha Luyabuza Abafikisayo
Yintoni Endimele Ndiyilindele Emtshatweni?—Inxalenye 1
Ziziphi iingenelo kunye neengxaki onokuzilindela emtshatweni?
Yintoni Endimele Ndiyilindele Emtshatweni?—Inxalenye 2
Funda ngendlela onokuzilungiselela ngayo iingxaki engakhange uzicinge emtshatweni.
Luyintoni Uthando Lokwenene?